परराष्ट्रको आधिकारिक जवाफको पहिलो पत्र ! | शहरबाट शब्दहरु
« कमिटी निर्माण र बृहत निर्णय !
आगामी साता जवाफको आशा ! »
अक्टोबर १६ , शुक्रबार आश्विन ३० – ५१ दिन
मिशन सर्च सबिना
बिहानै देखि चटारो छ । हिजो बैठकको सहमति अनुसार जापानमा एउटा पत्र लेख्नुपर्ने भएकोले । बिहान भेट्ने वाचा पुरा गर्दे अनोज शाक्य आईपुगे । लगभग हिजोको समय अनुसार हाम्रो भेट भयो । यता तीन जनाको समुहले उही शंका र आरोपित कुराहरुमा अडित हुनपुगे ।
पत्र प्रेषितको कुरा भएकोले यसलाई सानुलालको घरबाट पठाईयो । त्यसपछि चियाको स्वाद लिँदै सबिनाको खोजी र प्रमाण जुटाउन उनका विद्युतीय खाताहरु पल्टाईयो । जसबाट निकै कुराहरु खुल्न पुगेको छ । त्यसपछि त्यही प्रमाणको आधारमा हामीले केहीलाई फोन सम्पर्क समेत गर्यो जापानमा । लामो कुराकानी समेत भयो । यसमध्ये कतिपय कुरालाई यहाँ लेख्न नसकिएकोमा म क्षमाप्रार्थी छु ।
यही सिलसिलमा व्यस्त भईरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अरुण धितालको फोन आयो । सबिनाको खोजीको दोश्रो प्रगति विवरण आएको रहेछ । दिउँसो ३ बजे भित्र आउन भनेर फोन काटियो । त्यसपछि नयाँ केही कुराको ‘पर्दाफाश’ होला भनेर निकै शंकामय कुरा समेत भयो । सबै जानुभन्दा केही जानु वेश ठानेर स्थानीय सुर्यमान र सानुलाल परराष्ट्रतिर जानुभयो । उताबाट जापानी दूतावासमा जानकारी लिन पुगेका उनीहरुले राम्रो जवाफ पाएनन् । फोनको कुरा निकालेर उनीहरुलाई सम्बन्धित मान्छेले कराएछन् । अनोज र म यही छु । हामी केही समयमा आउने वाचा गरेर पत्रिकाको बाँकी काम सक्याउने तरखरमा थियौं । यो सिध्याएर हामी राजधानीको भिडभाड र चापचापको स्थितीबाट पार पाउँदै नजिकिन लाग्दा भएको फोन सम्पर्कमा आउनु नपर्ने कुरा उठ्यो । त्यसपछि बेलुका भेट्ने कुरा भयो । विवरणमा नयाँ कुरा केही रहेनछ ।
बेलुका भेटमा हेर्ने भनेर मैलै फोन राखे । साँझ काम सिध्याएर म घरमा पुगे करिब ८ बजेतिर । अनि त्यही कुराको शंकामा पत्र हेर्यौ । सक्कली पत्रको कुनै अंश थिएन । त्यो विवरण पढेर उतै छोडेर आउनुपर्ने रहेछ । उहाँले त परराष्ट्रको तर्फबाट जापानमा खोजी हुँदैछ भनेर जानकारी गरेर लेखिएको मन भुलाउने पत्र रहेछ । सानुलालको लागि यो दोस्रो पत्र थियो । यसको कुनै महत्व छैन । नजिकै बसेका अनोजले भने । त्यत्रो समयबित्दा समेत खोजी हुँदैछ भनेर आधिकारिक जवाफ पहिलो पत्र थियो त्यो । अनि त्यसपछि लामो कुरा गरिएन । ललितपुरबाट प्रकाशित अनलाईन पत्रिका साप्ताहिकमा छापिएको बिशेष समाचारको ’boutमा कुरा भयो । सानुलालले पढे र ठिक छ भनेर प्रतिकि्रया समेत गरे । अन्तिम निष्कर्ष त्यही थियो । खोजीको अन्तिम सुखद जवाफ कहिले आऊला ?
This entry was posted on अक्टोबर 16, 2009 at 6:24 अपराह्न and is filed under ललितपुर खबर. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.
ट्यागहरु: जापान, मिशन सर्च सबिना